जाडोमा कुन–कुन रोगको जोखिम ? यसरी जोगिनुहोस्
विराटनगर, २६ कात्तिक । सामान्यतया जाडोको मौसममा चिसो बढ्ने हुँदा अन्य समयको तुलनामा यो समयमा स्वास्थ्य जटिलता धेरै देखिन्छन् ।
चिसोले सबैभन्दा धेरै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा पहिलाबाटै स्वास्थ्य समस्या भएकालाई धेरै सताउने गर्छ । धेरैजसो छातीको समस्या भएका तथा श्वासप्रस्वासमा समस्या भएका व्यक्तिमा रोगको जटिलता बढेर जाने जोखिम रहन्छ । साथै, लामो समयदेखि रक्सी र चुरोट सेवन गरिरहेका व्यक्तिलाई पनि जाडोमै जोखिममा पार्ने कोशी अस्पतालका डा. राम साह बताउँछन् ।
जाडोको समयमा मुख्य देखिने समस्या भनेको सामान्य मौसमी फ्लु हो । जाडोको समयमा नाक बन्द हुने, नाकबाट पानी बग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी खसखस हुने, घाँटी दुख्ने, जोरो आउने, हाच्छ्युँ बढी आउने, टन्सिल हुने, निमोनिया जस्ता समस्या देखा पर्ने हुन्छ । कसैकसैमा टाइफाइड देखिने सम्भावना पनि रहन्छ ।
हालको समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको हुँदा कोरोना र मौसमी फ्लुको लक्षण मिल्ने भएकाले रुघाखोकी लागेका बिरामीहरूमा एक प्रकारको डर बढिरहेको छ । मौसम परिवर्तन भइरहेको कारणले मौसमी रुघाखोकी देखापर्न सक्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा परीक्षण गराए पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउने डा. साह बताउँछन् ।
मौसम परिवर्तनको समय छ, धेरैजसोलाई सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो देखिन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘शरीरलाई न्यानो राख्न सकेमा भाइरल संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । श्वासप्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिका लागि चिसो मौसमले निकै सताउने गर्छ । पुरानो दम, इन्फ्लुएन्जा तथा संक्रमणका कारण खासगरी जाडोमा दम, आस्थमा र अन्य समस्या बल्झिन सक्छन् ।
जाडोमा चिसो, धुँवाघुलोलगायतका वायु प्रदूषण, चिसोको एलर्जी तथा रक्सी र चुरोट सेवन गरिरहेका व्यक्तिमा छातिमा समस्या आएका कारण दम फुल्ने, काम गर्न गाह्रो हुने, सास फेर्नै समस्या हुनेजस्ता जटिलता देखापर्छन् । दम बढ्दै गएमा अन्य समस्या देखिने हुँदा दमका बिरामीले जाडोको मौसममा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
जाडो मौसममा हृदयाघातको जोखिम पनि बढेर जाने गर्छ । चिसोले गर्दा नसा खुम्चिने हुँदा केही मात्रामा जाडोको समयमा हृदयाघातको जोखिम बढेर जान्छ । त्यस्तै जाडो बढ्दै जाँदा जोर्नी दुख्ने तथा बाथरोगले सताउने गर्छ । तर, भित्र जोर्नीमा असर पुगेको छ भने जाडोमा मात्र नभएर जुनसुकै मौसममा पनि बाथले सताउने हुन्छ । केही मानिसलाई भने बाथरोगले जाडोमा धेरै दुःख दिने गरेको महसुस भएको पाइन्छ ।
सुगर, प्रेसर लगायतका पहिलाबाटै स्वास्थ्यमा समस्य भएका व्यक्तिलाई पनि चिसोमा गाह्रो हुन्छ । संक्रमण भएमा, चिसोको एलर्जी भएका, छातीमा समस्या भएका, टिबीका रोगी, छाती कमजोर भएका, मुटुरोगी, पुरानो दमका रोगी, सुगर, प्रेसर भएका रोगीमा चिसोले रोगलाई बढाउने सम्भावना हुन्छ । पहिलादेखि नै स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएका कारण जाडोमा चिसोका कारण अन्य समस्याहरू धेरै बढेको जस्तो मसहुस हुने डा. साहको भनाइ छ ।
जाडोमा स्वस्थ रहने टिप्स :
– चिसो लाग्नबाट बच्नका लागि सबैभन्दा पहिला न्यानो लुगा लगाएर न्यानो भएर बस्नुपर्छ ।
– जाडोको समयमा तातो तथा झोलिलो खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ ।
– चिसो कुरालाई सक्दो टाढा राख्नुपर्छ ।
– व्ययाममा साथै शारीरिक गतिविधि गरी शरीरलाई लयमा राख्नुपर्छ ।
– कागती, सुन्तलालगायतका भिटामिन सीयुक्त फलफूलको बढी सेवन गर्नुपर्छ ।
– मौसमी सागसब्जी र फलफूलको सेवन गर्नुपर्छ ।
– पहिलाबाट स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिले स्वास्थ्यको बढी ख्याल गर्नुपर्छ ।
– भाइरल संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्कोमा छिट्टै सर्न सक्ने हुँदा संक्रमण भएका व्यक्तिबाट टाढै बस्नुपर्छ ।
– विभिन्न स्वास्थ्यमा समस्या भएका रोगीले चिसोबाट बच्न नियमित चिकित्सकको निगरानीमा औषधि सेवन गर्ने, चिसोमा धुलो, धुँवाबाट बच्ने गरेमा केही हदसम्म जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
– जाडो मौसममा हुन सक्ने भाइरल संक्रमणको जोखिमबाट बच्न फ्लुविरुद्धको खोप लगाउन सकिन्छ ।
– वृद्धवृद्धा तथा छाति कमजोर भएका व्यक्तिले इन्फ्लूएन्जाको खोप लगाउन सकिन्छ ।
– टिवी, निमोनिया तथा दीर्घकालीन दामका रोगीले निमोनियाविरुद्धको खोप पनि लगाउन सकिन्छ ।
– स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएमा तुरुन्तै डाक्टरको परामर्श लिनु पर्छ ।